MacBook kutengesa kwakakura 94% mukota yekutanga yegore rino | Ndinobva mac
Mukota yekutanga yegore rino Apple yatengesa ingangoita 6 mamirioni MacBooks. Iwo manhamba fungidziro, sezvo kambani isingawanzo kupa ruzivo rwakawanda nezvekutengesa kwayo, kunyangwe iwo ari manhamba ekuzvirova pamusoro.
Chaizvoizvo iyo nyowani nguva yeMacs Apple silicon Chave chiri kubudirira kukambani. Kubhejera kune njodzi neApple, munguva yakazara denda repasirese, asi pasina mubvunzo iro chairo. Uye ikozvino, yekutanga iMac zvakare inoonekwa ine M1 processor. Nguva dzakanaka dzeApple, hapana mubvunzo.
Apple yatengesa fungidziro 5,7 mamiriyoni yeMacBooks mukota yekutanga ya2021, zvichibva pane nyowani yakaburitswa yekutengesa malaptop nhasi neChirongwa Chekuongorora.
Iwo manhamba anosanganisira kutengesa kweiyo mamodheru MacBook Pro y MacBook Air, kusasanganisa Mac mini, Mac Pro, uye iMac. Ndokunge, maraptops ekambani chete.
Apple yaive yechina pakukura kugadzira pasi rese, ichitevera Dell, HP uye Lenovo, nemakambani matatu anotumira pakati pemamirioni gumi nematanhatu emamirioni panguva yekota yekutanga ya10.
Iwo malaptop 5,7 mamirioni akatengeswa neApple akawedzera makumi mapfumbamwe nematanhatu muzana zvichienzaniswa neamamirioni 94 aakakwenya mukota yegore rapfuura. Zvese izvi nekuda kwekukura kwakasimba kunouya kubva mukuenderera kunodiwa kubva kune vashandisi vanoshanda kana kudzidza kubva kumba nekuda kwedenda, uye kugamuchirwa kwakanaka kwevashandisi veMacs matsva ane processor. M1.
Mugove weApple wemusika wekota yaive 8.4 muzana, uchienzaniswa ne7.8 muzana gore rapfuura. Lenovo y HP ivo vanoramba vari vatungamiriri vemusika, vachitengesa akasiyana malaptop anomhanya Windows padhuze neChannelbook, nekukura kwakasimba muchikamu chedzidzo, kunyanya nekuda kwemutengo wavo.
Kutengesa kwakanaka nekuda kweM1
Yese laptop yekutengesa yakawedzera 81 muzana gore-pamusoro-gore pakati pevatengesi vese vakuru. apuro Kunyanya, inogona kunge yakaona kukura kwakakura, nekuda kwekutanga kwaNovember kwe1-inch MacBook Pro M13 uye MacBook Air.
Apple inogona kuchengetedza PC yayo kutengesa kukura sezvo ichigadzirira kuunza nyowani, yakatonyanya kusimba Apple Silicon modhi gare gare gore rino. Runyerekupe runoratidza kuti pane akagadziridzwa mhando dze 16-inch MacBook Pro yakagadzirira kuvhurwa, uye a iMac M1 yakakura kupfuura yazvino makumi maviri neshanu-inch. Apple inotarisirwa zvakare kuunza MacBook Air nyowani uye MacBook Pro nyowani, asi vangangosvika kusvika muna 24.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » MacBook kutengesa kwakakura 94% mukota yekutanga yegore rino